Kusvirwa nadriver washefu wandinodanana naye – Vanoda Zvinhu
Ndakabva ndaseka zvangu ndikati ” Waita hako, kubva itore ndione kana paine chandingabatsirewo nacho.” Muchinda akabva adzika downstairs ini ndokusara ndichikwira pa coffee table kuti ndinyatsoona paida kuroverwa pacho. Akadzoka ndisati ndaburuka, ndaitoita zvekesveerera sezvo ka table kaive kapfupi, apa curtain rangu raitobva pa ceiling chaipo. Ndaive ndakanganwa kuti handina kupfeka mukati, pandakati cheu ndikaona munhu akatarisa kumashure kwangu chaiko. Ndakabva ndadzika patable chop chop ndave kunzwa kakunyara ndisingazivi kuti pane chaaona here.
Ndakabva ndatora chair ndikabva ndakwira. Ndakadhonza cover kudaro iye achibva angoti te-te-te kurovera kapikiri kaye pakare. Amon akazoti regai ndibvise kamwe kari nechepakati aka ndirovere pacorner ipapo, kuti panyatsosimba, nekuti ndipo pane basa. Akazvuva katable kake ndokuuya pandaive ndichiri ndokuti ndinyatsokakata jira kuti risazosara rakaita loose, achibva tanga kutsvaga pakati pfavei pekurovera chipikiri. Ndipo pandakatarisa zvigunwe zvake wanike haiwa ano maziminwe akasimba akareba akasviba kuti ndoo.
zvawanda ndokundidhonza kwaakupinza ruoko mukadhirezi kangu achibata zamu, uku rumwe ruri kubata magaro aive akapfava kunge ganda remwana mucheche. Ini ndakanga ndongobatabata zimboro riya, wanike zimusoro racho rakaoma kuita kunge rine man’a chaiwo. Akaona kushamisika kwangu zvikanzi “Asi hausati wamborara nemunhu akachekwa ganda? Ndizvo zvainoita, pese pandinge ndichifamba inenge ichikwizira paunderwear saka inoomarara. Zvino nhasi uchayuwira, nekuti kana garwe rikapinda mumvura haritoti ipapo, paichazopfava unenge waibva”
Ini akanga atondinonokera, sezvo paive pasina zvekukisana ndakabva ndangomudhonzera mu bedroom, kadhirezi ndichibva ndangokakanda kwakadaro uko. Iyewo patakapinda aive atobvisa shati, ndakazomubatsira kubvisa tirauzi akagara pamubhedha nebhutsu. Apa mboro yake iya yakanga yamira kuita kunge gear stick remumota make ichiritidza kutsamwa zvaityisa, ende iri hobvu chaiyo. Akabva andibata mapendekete ndokunditendedza zvikanzi fongora wakabata mubheda wako. Ndaive ndakatota hangu asi pakapinda zimusoro racho ndakarwadziwa. Akabva aipinzi half ndokutanga kutambisa magaro age achibaya pa roof yebeche, pane clitoris asi pari nemukati. Ndakamboda kudzorera, ndichipushira magaro kumasure nekuatenderedzawo, asi rume rakabva randiti chiuno dzvi, ndokundidzvanyira pamubhedha zvekuti kana kuzunguzika chaioko
ndaitadza. Akakwenya kwemamainitsi anopfuura ten akangodaro, asati aipinza yese, achingoita zvekubaya achidzosera kumasure. Aisakoira achiita zvekukwakura aiwa, aingiotenderedza iripo pandataura. Ndakanzwa heat yopararira nemuviri wangu wese ndikaziva kuti ndotunda. Ndakaridza mhere asi rume harina kumbochinja. Pandakazoti ndakufema zvinenge zviri nani ndipo paakazoiti bvo-o yese, yosvika kuchibereko chaiko. Akatanga zvino kukoira iota semuseve chaiwo
Ipapo akabva atupfunura maoko ake pachiuno changu ndikabva ndatanga kumutambirawo ndikati nhasi tinopedzerana. Ndakarohwa ne angle iyoyi for more than 20 minutes ndichingozhamba kuita kunge pafiwa chaipo.Ndakasverera maoko angu nepasi pedumbu rangu ndikabva ndatsvanzvadzira ndikabata machende ake. Aive akaoma kuti nga akakura kunge mazai achitsvaira kumagaro kwangu. Ndakaapuruzira ndikanzwa avekudzokera nechemukati. Rume rakadzvova kunge bhuru remombe ndichibva ndanzwa chombo chake kuoma kuti ndi, chaakugwinha gwinha. Akaita kundirovera kamwe zvekuti mabvi angu akasumuka kubva pamubhedha chaipo ndokubva andisunga muchiuno nemazioko ake achibva aoma akadaro. Ipapo ndakabva ndanzwa
kurohwa nenamo yaipisa ichiita kunama kuchibereko chaiko, kunzwa kuti tsa, tsa, ndiye tsa-a-a-a ,tsa-a-a-a. Ini ndaive ndongogomera ndichiyuwira. Akabva ambowira pamusoro pangu nekumusana kudaro, achibva azoiti zvomo, ndichibva ndati bhi pamubheda ndakatarisa
ndangofa ndakadaro. Ndakatozomutswa ne mosquite kuma past eight sezvo ndaive ndisina kuvhara mahwindo. Chandakangokwanisa kuita kuvhara mahwindo nekupinda mumagumbeze. Mangwana acho ndakafonerwa nashefu vangu ndiri kubasa, kwaakutondivhunza kuti nhai Amon aka deliver here pasuro yako. Ndakarohwa nehana, zvikanzi aiwa usatye hako, aramba basa nhasi, ati akuda kunogara kuruzevha, saka ndati ndicheke kuti haana kutiza netwuma wine twako twandakamutuma natwo here. Ndakangoti ehe akaunza pasuru asi hatina kumbonyanyotaura . Ndakabva ndaona kuti pamwe atya kuti tikazobatwa aibva angoiswa mu drum re acid. Asi mwoyo wangu wakarwadzwa. Chokwadi here murume akadaro kubva angondisiya andiita
· Last modified June 23, 2015 0